1 Korinte 14 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
1 Korinte 14:1-40
14 Phishekelani uthando, nokho niqhubeke nifuna iziphiwo ezingokomoya ngentshiseko,+ kodwa okungcono ukuba niprofethe.+ 2 Ngoba okhuluma ngolunye ulimi akakhulumi nabantu, kodwa noNkulunkulu, ngoba akekho oqondayo,+ kodwa ukhuluma izimfihlo+ ezingcwele ngomoya. 3 Nokho, lowo oprofethayo wakha,+ akhuthaze futhi aduduze abantu ngenkulumo yakhe. 4 Lowo okhuluma ngolunye ulimi uzakha yena, kodwa lowo oprofethayo wakha ibandla. 5 Manje ngingathanda ukuba nonke nikhulume ngezilimi,+ kodwa ngikhetha ukuba niprofethe.+ Ngempela, oprofethayo mkhulu kunalowo okhuluma ngezilimi,+ ngaphandle-ke uma ehumusha, ukuze ibandla lakheke. 6 Kodwa ngalesi sikhathi, bazalwane, uma ngingeza ngikhuluma kini ngezinye izilimi, buhle buni engiyobe nginenzela bona ngaphandle uma ngikhuluma kini ngesambulo+ noma ngolwazi+ noma ngesiprofetho noma ngemfundiso? 7 Izinto ezingaphili zikhipha umsindo,+ kungaba umtshingo noma ihabhu; ngaphandle kokuba kwenze izikhawu emisindweni, kuzokwaziwa kanjani lokho okudlalwa ngomtshingo noma ngehabhu? 8 Ngoba ngempela, uma icilongo likhipha umsindo ongaqondakali, ubani oyolungela ukulwa?+ 9 Ngendlela efanayo futhi, ngaphandle kokuba nikhulume inkulumo eqondakala kalula,+ kuyokwaziwa kanjani lokho okukhulunywayo? Eqinisweni, niyobe nikhuluma emoyeni.+ 10 Kungenzeka ukuthi kukhona izinhlobo eziningi kakhulu zemisindo yenkulumo emhlabeni, kodwa nokho alukho uhlobo olungenayo incazelo. 11 Khona-ke, uma ngingawaqondi amandla omsindo wenkulumo, ngiyoba ngowesinye isizwe+ kulowo okhulumayo, nalowo okhulumayo uyoba ngowesinye isizwe kimi. 12 Kanjalo nani ngokwenu, njengoba nizifisa ngentshiseko iziphiwo zomoya,+ funani ukuba nibe nazo zivame ngenjongo yokwakha ibandla.+ 13 Ngakho-ke okhuluma ngolunye ulimi makathandazele ukuba ahumushe.+ 14 Ngoba uma ngithandaza ngolunye ulimi, yisiphiwo sami somoya esithandazayo,+ kodwa ingqondo yami ayitheli. 15 Khona-ke kuzokwenziwani? Ngizothandaza ngesiphiwo somoya, kodwa ngizothandaza nangengqondo yami futhi. Ngizohlabelela indumiso+ ngesiphiwo somoya, kodwa ngizohlabelela indumiso nangengqondo yami futhi.+ 16 Uma kungenjalo, uma udumisa ngesiphiwo somoya, umuntu ohlezi esihlalweni somuntu ovamile uzokusho kanjani ukuthi “Amen”+ ekubongeni kwakho, njengoba engakwazi lokho okushoyo? 17 Yiqiniso, ubonga ngendlela enhle, kodwa lona omunye umuntu akakhiwa.+ 18 Ngiyambonga uNkulunkulu, mina ngikhuluma ngezilimi eziningi kunani nonke.+ 19 Noma kunjalo, ebandleni ngingamane ngikhulume amazwi amahlanu ngengqondo yami, ukuze futhi ngifundise abanye ngomlomo, esikhundleni samazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngolunye ulimi.+ 20 Bazalwane, ningabi abantwana emandleni okuqonda,+ kodwa yibani izingane ngokuqondene nobubi;+ nokho nibe abakhule ngokugcwele emandleni okuqonda.+ 21 EMthethweni kulotshiwe ukuthi: “‘ Ngizokhuluma nalesi sizwe+ ngezilimi zezinye izizwe nangezindebe zezihambi+ kodwa nokho ngisho nangaleso sikhathi ngeke singilalele,’ kusho uJehova.”+ 22 Ngenxa yalokho izilimi zingezokunikeza isibonakaliso,+ hhayi emakholweni, kodwa kwabangewona amakholwa,+ kanti ukuprofetha akukhona okwabangewona amakholwa, kodwa kungokwamakholwa.+ 23 Ngakho-ke, uma ibandla lonke libuthana ndawonye endaweni eyodwa futhi lonke likhulume ngezinye izilimi,+ bese kungena abantu abavamile noma abangewona amakholwa, ngeke yini bathi niyahlanya? 24 Kodwa uma nonke niprofetha bese kungena noma yimuphi ongelona ikholwa noma umuntu ovamile, usolwa yibo bonke,+ uhlolisiswa yibo bonke; 25 izimfihlo zenhliziyo yakhe ziyabonakala,+ kangangokuba uyokuwa ngobuso bakhe akhulekele uNkulunkulu, athi: “Ngempela uNkulunkulu uphakathi kwenu.”+ 26 Khona-ke, kuzokwenziwani, bazalwane? Uma nibuthana ndawonye, omunye unehubo, omunye unemfundiso, omunye unesambulo, omunye unolunye ulimi, omunye unencazelo.+ Zonke izinto mazenzeke ngenjongo yokwakha.+ 27 Futhi uma omunye ekhuluma ngolunye ulimi, makulinganiselwe kwababili noma abathathu kugcine, futhi badedelane; futhi omunye ahumushe.+ 28 Kodwa uma engekho umhumushi, makathule ebandleni azikhulumele yedwa+ futhi akhulume noNkulunkulu. 29 Ngaphezu kwalokho, makukhulume abaprofethi+ ababili noma abathathu, abanye baqonde incazelo.+ 30 Kodwa uma kuba khona isambulo komunye+ ngesikhathi ehlezi lapho, owokuqala makathule. 31 Ngoba ningakwazi nonke ukuprofetha+ ngamunye ngamunye, ukuze bonke bafunde futhi bonke bakhuthazwe.+ 32 Iziphiwo zomoya zabaprofethi kumelwe zilawulwe abaprofethi. 33 Ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wokuthula+ akayena owesiyaluyalu.+ Njengakuwo wonke amabandla abangcwele, 34 abesifazane mabathule+ emabandleni, ngoba akuvunyelwe ukuba bakhulume, kodwa mabazithobe,+ njengoba nje noMthetho+ usho. 35 Khona-ke, uma befuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo emakhaya, ngoba kuyichilo+ ngowesifazane ukuba akhulume ebandleni. 36 Ini? Ingabe izwi likaNkulunkulu laphuma kini,+ noma ingabe lafinyelela kini kuphela? 37 Uma umuntu ecabanga ukuthi ungumprofethi noma ukuthi unesiphiwo somoya, makazivume lezi zinto enginilobela zona, ngoba ziwumyalo weNkosi.+ 38 Kodwa uma umuntu engenalwazi, uqhubeka engenalwazi. 39 Ngenxa yalokho, bazalwane, qhubekani nikufuna ngentshiseko ukuprofetha,+ kodwa nokho ningakwenqabeli ukukhuluma ngezinye izilimi.+ 40 Kodwa zonke izinto mazenzeke ngokufaneleyo nangohlelo.+
1 Korinte 14